Posted by မီးမီးငယ် at 8:51 AM
Anonymous April 27, 2016 6:19 PM
Ma Mee Nage !
မီးမီးငယ် April 29, 2016 2:35 PM
ko9April 28, 2016 7:12 AM
Thank you for your share knowledge. (Y)
မီးမီးငယ် April 29, 2016 2:37 PM
နန်း ရွှေမှုံ April 29, 2016 10:57 PM
လက်ဘက်တုံးကြီးကို သဘောကျလိုက်တာနော်... အလယ်ခေါင်ကနေ စခွာပြီး ရေနွေးခပ်သောက်ရတာလား။ အလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိပြီး ဘယ်ဈေးလောက်ရှိလဲဟင် အမ။ ဖွားဖွားတို့ ဒက်ဒီတို့က မြောက်ပိုင်းရှမ်းတွေဆိုပေမဲ့ ရှမ်းပြည်လဲမရောက်ဖူးဘူး။ ရှမ်းစကားလဲ မတတ်ဘူး။ ဝမ်းနည်းစရာပဲနော်။
မီးမီးငယ် May 01, 2016 2:29 PM
100 gm ကနေ5kilo အထိရှိတယ်
Anonymous April 30, 2016 8:20 PM
ရှမ်းပြည်က လက်ဖက်ညွန့် အကောင်းစားလေးတွေလွမ်းပါ့။
မီးမီးငယ် May 01, 2016 2:30 PM